लिखित सम्झौताका साथ तपाईको हेम्प फार्म पट्टा सुरक्षित गर्नुहोस्
हेम्प फार्म लीज वा क्रप शेयर
के म मेरो हेम्प फार्म भाँडामा लिन सक्छु?
यदि किसानसँग हेम्प खेती गर्ने इजाजतपत्र छ भने, तपाईले आफ्नो फार्म भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। औसत किसानले खेती गर्ने सबै जमिनको स्वामित्व हुँदैन। र, इलिनोइसमा, हेम्प फार्म लाइसेन्स आवेदनले एक आवेदकलाई उसले फार्म भाँडामा लिन्छ जुन उसले भाँडा हुर्काउनको लागि चाहान्छ भनेर संकेत गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईको हेम्प फार्मका लागि किन लीज छ?
धेरै फार्महरूमा लिखित लिज हुँदैन, वा लिखित लिज दशकौं पुरानो हो। इलिनोइसमा मानिसहरूलाई मौखिक फार्म पट्टाहरू हुन सक्छन्, तर हेम्प सिमी वा सोयाजस्तो हुँदैन - हेम्पलाई राज्यबाट इजाजतपत्र चाहिन्छ र कसले खेती गर्न सक्छ वा प्रक्रिया गर्न सक्छ भन्ने बिरूद्ध प्रतिबन्ध छ। त्यसो भए तपाईको फार्मलाई लिखित लिजबाट सुरक्षित गर्नु राम्रो विचार हो।
हामी फार्मका लीजहरूको भुक्तानीको सामान्य प्रकारहरूबारे छलफल गर्नेछौं र तपाईंको हेम्प खेती व्यवसायको लागि लिखित पट्टा लिने शीर्ष तीन लाभहरू प्रदान गर्नेछौं। परामर्श लिनुहोस् भांग वकील तपाइँको व्यवसाय को बारे मा अज्ञात जोखिमहरु बाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न को लागी।
फार्म लीज भुक्तानीको लागि नगद भाडा वा क्रप साझेदारी।
फार्म पट्टा दुई मुख्य समूहमा पर्दछ: नगद भाडा, वा क्रप शेयर। इलिनोइसमा, जहाँ २०१ 2019 पहिलो वर्ष भैंस फार्मको हुनेछ, या त पट्टाको प्रकार धेरै सामान्य छ। फार्म लीजले नगद भाडामा कल गर्न सक्ने सम्भाव्यता जस्तै यो बाली बाँडफाँडको लागि गर्छ, तर हेम्पेले तल छलफल गरिएको कारणले बालीको हिस्सामा बढी उधार दिन सक्छ।
लिखित फार्म लीजको शीर्ष तीन फाइदाहरू
उत्तम उद्योग अभ्याससँग अनुरूप रहनुहोस्
दुबै किसान र जमिन मालिकलाई संरक्षणको साथ सम्झौताको सर्त स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुहोस्
"नगद भाडा" वा "बाँडफाँड साझा" को रूपमा भुक्तानी सर्तहरू सेट गर्नुहोस्
नगद भाडा सम्झौता
एक नगद भाडा फार्म पट्टा एकदम सरल छ, भाडाको लागि पैसा। भांग किसानले एक डलरको आंकडा राख्छ कि उसले प्रति एकर कति तिर्ने छ। अक्सर फसल वर्षको लागि केवल दुई भाडा भुक्तानी आउँछ, एउटा मार्च १ को बारेमा, र अर्को अक्टुबर १ को बारेमा, वा बाली जब फसललाई आयमा परिणत गर्न आउँछ।
बाली प्राय: अन्न बजार मार्फत वर्षभरि बेच्दछ - तर २०१ 2019 को रूपमा हेम्पको पहिलो फसल वर्ष हो - अन्न मार्केटिंग र फ्यूचर करारहरू अन्य वस्तुहरूको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा बाली बेच्न प्रयोग गर्न सकिँदैन।
नगद भाँडा फार्मले भाँडाको निश्चित रकमको पूर्वानुमानताको साथ फसलको बिक्रीबाट नाफामा भाग लिने व्यापार भाडामा दिन्छ।
फार्म लीजहरू लिखित रूपमा हुनु हुँदैन - तर फार्मको समाप्ति कम्तिमा हुन्छ।
क्रप सेयर एग्रीमेन्ट्स
जब किसान र जमिन्दार बाली उब्जनी गर्न र बाली काट्न सँगै मिलेर काम गर्ने कुरामा सहमत हुन्छन्, तब बालीको बाँडफाँड हुन्छ फसल बाँडफाँडलाई भाँडादार खेती पनि भन्न सकिन्छ। जमिन मालिकले आफ्नो आखाडा छोड्छ, किसानले श्रम र उपकरण दिन्छ, र ती दुवै नाफा वा घाटामा सहभागी हुन्छन्।
क्यान्नाबीडिओल (सीबीडी) बजार विस्फोटले औद्योगिक हेम्प फार्मिंग कार्यहरू धेरै धकेलिरहेको छ। उद्योगमा छिर्ने धेरै किसानहरू हाल सम्भव भए भन्दा राम्रो नगदी बालीको रूपमा हेम्प बढ्न चाहन्छन्। ब्राइटफील्ड समूह सीबीडी केहि छोटो वर्षमा $ २२ बिलियन डलरको उद्योग हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछ।
बजारको अर्थशास्त्रको कारण, र उद्योगमा उत्साह, बालीनाली साझेदारी सम्झौताहरूले भांग किसानहरूलाई उनीहरूको जमिन्दारहरूसँग नाफा बाँडफाँड गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। खर्च र नाफा बाँडफाँड गर्न सम्झौताको प्रावधान जुनसुकै किसान र घरमालिकले चाहानुहुन्छ मस्यौदा तयार गर्न सकिन्छ।
तपाईको हेम्प फार्मका लागि कुन फार्म लीज उत्तम छ?
त्यो तपाईं पट्टा बाहिर के चाहानुहुन्छमा निर्भर गर्दछ। के तपाइँ पूर्वानुमानयोग्य भुक्तानी र जमिन मालिकको खेती व्यवसायबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए, नगद भाडा विकल्पलाई विचार गर्नुहोस्। तर सीबीडी बूम बस्ट गर्नका लागि हेर्नुहोस् र सीबीडी रिच हम्पको मूल्य घट्न। खस्कँदै गरेको मूल्यले ती उच्च भाँडा भुक्तानी स्टार्टअप भांग किसानहरूका लागि कष्टकर बनाउन सक्छ।
के जमिन मालिकको आफ्नै सीबीडी मार्केट बोनन्जाबाट नाफा कमाउने सपना छ, र हेम्पा किसानसँग राम्रो काम गर्ने सम्बन्ध छ? त्यसो भए क्रप सेयर सम्झौताले दुबै पक्षहरूलाई नयाँ हेम्प ईन्डस्ट्रीमा लागत र नाफा विभाजित गर्न सक्षम गर्दछ।
कुनै उत्तर सही छैन, तर त्यहाँ एउटा ठूलो कारण यो छ कि तपाईंको हेम्प फार्म लिज लिखित रूपमा हुनुपर्दछ।
हेम्प नयाँ र अत्यधिक विनियमित छ
यदि किसानसँग इजाजत पत्र छ भने उब्जनी बढाउनको लागि अनुमति दिईएको खण्डमा मात्र हेम्प उत्पादन गर्न सकिन्छ। हेम्प किसानले हेम्प प्रक्रिया गर्न सक्दैन जब सम्म ऊ हेम्प प्रोसेसरको रूपमा दर्ता हुँदैन। राज्यले हेम्पको निरीक्षण गर्नेछ र देख्दछ कि कार्यहरू क्रमबद्ध छन्।
केवल लिखित हेम्प फार्म लीजले दुवै पक्षहरूको सम्झौताको सही सर्तहरू प्रदान गर्दैन, यसले तपाईंको हेम्प फार्मले उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरूको पालना गरिरहेको देखाउँछ। तपाईंको हेम्प फार्मको लागि ठाउँमा नीतिहरू र प्रक्रियाहरू भएकोले यसलाई अनुपालनमा रहन र राज्यले तपाईंको हेम्प फार्मलाई इजाजत दिने राम्रो स्थितिमा रहन मद्दत गर्दछ।
शुभकामना तपाईंको नयाँ बाली बढाउँदै। र कल गर्नुहोस् यदि तपाईं हाम्रो भेंडा उद्यम मा हाम्रो वकिल संग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ।